Homeबिबिधक्वारेन्टाइन बसेर घर जाने प्रवासीलाई सित्तैमा कण्डम !
काठमाडौं । कामका लागि विभिन्न ठाउँमा गएका म,जदुरहरु कोरोना भा,इरसका कारण धमाधम गाउँघर फर्किँदैछन् । तर भा,इरस सं,क्रमणको जोखिमका कारण टाढा टाढाबाट फर्किएका मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बसालेर मात्रै गाउँघरमा छिराउने गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइनको बसाइ पूरा गरेर घर फर्किने म,जदुरहरुका लागि सरकारले कस्तो उपहार देला ? भारतको बिहारमा चाहिँ १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका प्रवासी म,जदुरहरुको हातमा क,ण्डम उपहार थमाएर घर पठाइएको छ ।
कोरोनाको जो,खिम बढ्दो : पूर्वी नाकाबाट परीक्षणबिनै धमाधम भित्र्याइँदै नेपाली
prescription withoutadoctor’s prescription ed pills withoutadoctor prescription